Moments Neshamwari 52
Chii chinoseka, uye nei vanhu vachiseka?
Kuseka ndiko kutaura kwechimiro chendangariro uye chechimiro kuburikidza nekuita mutserendende inzwi remanzwi. Pamunhu uye mamiriro acho ezvinhu anonakidza kuseka kwake, zvinoenderana nekuseka uye maitiro ekuseka; sejiggite, titter, gurgle, yehudiki uye yakapusa yehudiki; kuseka, kutapira, kana kuseka kwemoyo wakanaka. kuseka kusekwa, kusekwa, kusekwa, kunyumwa, kusekwa, kusekwa. Ipapo pane kuseka zvinonyangadza kweiye munyengeri.
Kuseka sechokwadi chiratidzo chechimiro uye nekubatanidzwa kwemuviri nepfungwa dzemunhu anoseka, sekutaura ndiwo musimboti wekusimudzira kwepfungwa uyo unoipa kutaura. Kutonhora mumusoro, kutsva, kana kumwe kurwara kwemuviri, kunogona kukanganisa kuseka uye kutenderera kuseka, asi zvipinganidzo zvakadaro zvemuviri hazvigoni kuvanza mweya nehunhu hunopinda mukuseka uku.
Kutenderera kwemuviri kuseka kunokonzerwa nekuita kwetambo dzemanzwi uye mutserendende pamhepo yemhepo iri pamusoro pavo. Asi mafungire epfungwa panguva yekuseka anopa mweya kuseko, uye nekudaro anoita pane sisitimu yekumanikidza yakadai yekusimbisa mutsipa uye yekutaura sezvo ichizopa muviri uye kunaka kuruzha urwo mweya wekuseka uri yakaratidza.
Kufanana nezvakawanda zvezvishamiso zvehupenyu, kuseka kune zvakajairwa zvekuti hakuonekwe kuve kunoshamisa. Zvinoshamisa.
Pasina pfungwa hapana chekuseka. Kuti ukwanise kuseka munhu unofanira kunge uine pfungwa. Chidembo chinogona kuita ruzha, asi hachigona kuseka. Mhou inogona kutevedzera nekuita zvimiro zvembambo, asi haigoni kuseka. Paroti inogona kutevedzera kurira kwekuseka, asi haigoni kuseka. Izvo hazvizive kuti chii chiri kuedza kuseka nezvazvo; uye munhu wese munharaunda inoziva kana paroti ari kutevedzera kuseka. Shiri dzinogona kuruka uye dzinofamba-famba uye dzichiita kupenya kwezuva, asi hapana kuseka; kitsi uye kittens zvinogona pururifuru, roll, puse kana paw, asi haigoni kuseka. Imbwa nehonye dzinogona kudzvanya uye kusvetuka uye kukakavara mumutambo unotamba, asi hazvina kupihwa kwavari kuseka. Dzimwe nguva kana imbwa ichitarisa kumeso kwemunhu nechinhu chinonzi "huchenjeri hwakadai" uye neicho chinoita sekutaridzika kwekuziva, zvinonzi zvimwe anonzwisisa zvinonakidza uye ari kuedza kuseka; asi haagoni. Mhuka haigoni kuseka. Dzimwe mhuka dzimwe nguva dzinogona kutevedzera kurira kwenzwi, asi izvo hazvisi kunzwisisa kwemazwi. Inogona kunyanya kuve chete echo. Imbwa haigoni kunzwisisa zvinoreva mazwi kana kuseka. Paanogona iye anogona kuratidza chishuvo chatenzi wake, uye mune imwe nhanho anopindura kuchishuvo ichocho.
Kuseka kutaura kwakangoerekana kwaratidza kwekukurumidza kukoshesa nepfungwa, kwechimiro chinotaridza zvisingatarisirwi chimwe chinhu chekusakwana, kushushikana, kusakodzera, kusakwana. Aya mamiriro anopiwa nezvimwe zvinoitika, kana chiito, kana nemashoko.
Kuti uwane kubatsirwa kwakazara kwekuseka uye kukwanisa kuseka zviri nyore pfungwa dzinofanira, kuwedzera kukurumidza kunzwisisisa kusanzwisisika, kusakwana, kusatarisirwa kwemamiriro ezvinhu. vane hwaro hwekufungidzira hwakagadzirwa. Kana pasina fungidziro, pfungwa haizoone zvinopfuura imwe mamiriro, uye nekudaro kushaya kwechokwadi kuonga. Asi kana paine zvekufungidzira pfungwa dzinokurumidza kuratidzika kubva pane izvo kuitika zvimwe zvinosekesa zviitiko nemamiriro ezvinhu ndokurondedzera izvo zvisina kunaka nekuwirirana.
Vamwe vanhu vanokurumidza kunzwisisa mamiriro uye kuona nhanho mune kuseka. Vamwe vanganzwisisa mamiriro ezvinhu, asi vasingafungidziri havaone kuti chii chinogona kutsigira kana kutungamira uye kune icho chakabatana, uye vanonoka kuona iyo pfungwa mune yekuseka kana mamiriro ekuseka uye anononoka kutsvaga kuti sei vamwe vanhu vari kuseka.
Kuseka chinhu chinodiwa mukukura kwevanhu, uye kunyanya mukuvandudzwa kwepfungwa kusangana nemamiriro ese ehupenyu. Kune kuseka kudiki mukugaya monotonous kudzvinyirira uye kuomerwa. Kana hupenyu huchida kuramba uchinetsana kuti uwane hupenyu husina chinhu, kana hondo uye pes-tirism ichitsvaira pamusoro penyika, apo rufu runokohwa kukohwa kwaro nemoto uye mafashama uye kudengenyeka, ipapo chete zvinotyisa uye kuoma uye nehupenyu hwehupenyu zvinoonekwa. Aya mamiriro ezvinhu anounza uye anomanikidza kutsungirira uye kusimba kwepfungwa uye nekukurumidza mukuita. Hunhu uhwu hwepfungwa hunovandudzwa nekutarisana nekukunda aya mamiriro. Asi pfungwa dzinodawo zororo nenyasha. Pfungwa dzinotanga kuvandudza, kudzikisira, nyasha, nekuseka. Kuseka kunokosha kuti zororo uye nyasha dzepfungwa. Pangosvika izvo zvasara zvakavanzika zveupenyu zvikapihwa, uye wotanga kupa nzvimbo kune zvakawanda, kuseka kunouya. Kuseka kunoita kuti pfungwa dzisasimuke uye kunobvisa kuomarara kwayo. Kuseka kunobatsira kuti pfungwa dzione mwenje uye ufare muhupenyu, pamwe nerima uye kunotonhora. Kuseka kunosunungura pfungwa kubva kunetseka mushure mekurwa kwayo nezvinhu zvakakomba, zvakatsiga uye zvinotyisa. Kuseka kunokodzera pfungwa yebasa idzva. Nekuwana simba rekuseka, pfungwa dzinogona kuvandudza simba rayo uye kurarama nematambudziko, kudzivirira kunyungudika uye kunyangwe kupenga, uye kazhinji dzinogona kudzinga kurwara kana chirwere. Kana murume akapa zvakanyanya kunyanyisa kuseka, ipapo rudo rwekuseka runomutadzisa kubva pakuziva zvakakomba, mitoro, mabasa uye nebasa rehupenyu. Murume akadaro anogona kunge ari nyore uye ane moyo wakanaka uye akanaka-hunhu, anogona kuwona zvinonakidza divi rezvinhu, uye kuva anodongorera, anofara shamwari. Asi zvaanoenderera mberi kuita kuseka kunakidzwa, anove akapfava uye asina kukodzera kusangana nezvakadzika zvehupenyu. Anogona kusiririswa uye kuseka murume waanofunga kuti anotora hupenyu zvakanyanyisa, zvakadaro anonzwisisa uye anokoshesa hupenyu hwusiri nani kupfuura iye uyo anopfuura nehupenyu akatakura moyo unoremerwa uye akaremerwa nehana.
Hunhu hwemurume hunogona kuzivikanwa munguva pfupi nekuseka kwake pane mazwi ake, nekuti iye anoedza zvishoma kuvanza uye anogona kuvanza zvishoma mukuseka kwake. Nemashoko anogona uye kazhinji zvinoreva zvinopesana nezvaanotaura.
Kune kashoma munhu upi noupi asingagamuchire iwo akapfuma, arizere kurira, kuseka kwakashata kwekutenda nekukurumidza uye kuseka kwakanaka kwakakwiridzirwa muhuwandu hwayo uye toni kuti ikwane kuitika nezvinoitika, uye ndiani angatadza kudzivisa gumbhu risina chinhu kana cackle ye munhu anogunun'una anoramba akabata mubhegi rake kana girobhu, kunyangwe chiitiko ichi chinga tsamwisa. Kunyangwe munhu ari kana asina kunyatsosununguka, kuzara kana kushomeka kwepfungwa kana manzwiro anogona kuzivikanwa nekuseka kwake. Vaya vane tsika yekutya, kukasira kana hysteria, ndichavaratidza nekupfupika kwavo, mapfumo, kana kurira kwavo kwehurefu, kupinza, kwekubaya. Iko kurira, kurira, simbi kurira, kurira, kufinha, ndizvo chiratidzo chehunhu sezvakaita chaizvo sezvo munhu akasara ane hunhu hunoratidzwa nekuenderana kwayo kuseka. Kubatana mukuseka kunoratidza kukura kwakatenderedzwa muhunhu, zvisinei zvingaitwe nekuseka. Mitezo mukuseka inoratidza kushaiwa budiriro muhunhu, zvisinei nekuti munhu angaedza sei kuvanza izvo zvaanoshaya. Mitezo inopa nzvimbo yekuenderana mukuseka, apo hunhu hunovandudzwa. Toni, kukwirira uye kuwanda kwekusanzwanana mukuseka, zvinoratidza kushomeka kana kusviba mukukura kwehunhu.
Mumwe ane magnetism mukuseka kwake anowanzova mumwe wemasikirwo uye anonzwa mafungiro. Vane hunyengeri nemanomano uye vakaipa neakashata vachatsvaga nekuseka kwavo, kunyange vachinyengera kana kunyengedza namashoko avo.